ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: PC အတွက် Viber မှာ zawgyi font နဲ့ ရေးမယ် ဖတ်မယ်..( Window-7 & 8 )
PC အတွက် Viber မှာ zawgyi font နဲ့ ရေးလို့ ဖတ်လို့ မရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ပါ..
သိပြီးသူ များတော့ ကျော်သွားပေါ့ဗျာ..
PC အတွက် Viber ကို ဒီမှာ ယူပါ..
ပြီးရင် ပုံမှန်အတိုင်း install လုပ်ပါ..
install လုပ်ပြီးလို့ Viber ကို ဖွင့်လိုက်ရင် ဖုန်းနံပါတ် တောင်းပါ လိမ့်မယ်..
မိမိ နိုင်ငံ ရွေးပြီး ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ..
code ထည့်ဖို့ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်.. အခုန ပေးလိုက်တဲ့ ဖုန်းထဲကို ၂ မိနစ် အတွင်းမှာ Viber က Your
Viber code is ဆိုပြီး message ပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်..
အဲဒီ code ကို ကွန်ပျူတာ မှာ ထည့်ပေးလိုက်ရင်.. ကွန်ပျူတာနဲ့ Viber သုံးလို့ ရသွားပါပြီ..
ဒါပေမယ့် Viber message မှာ မြန်မာစာ မမြင်ရတာ ဖတ်လို့ မရ ရေးလို့ မရတာ အတုံးလေးတွေ
ပေါ်နေတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်.. အဲဒီအတွက် ဒီ arialzawgyi ကို အရင်ဒေါင်းပြီး double click
ပေးလိုက်လို့ ကျလာတဲ့ အထဲက အပေါ်ဒေါင့်စွန်းက install ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
ဘာပဲမေးမေး ok ပဲရွေးလိုက်ပါ..
နောက်တခုက ဒေါင်းလို့ ရထားတဲ့ arialzawgyi ကို Right click ပေးပြီး copy ကူးပြီး control
panel ထဲက fonts ထဲကို သွားပြီး paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ...
ဘာမေးမေး ok ပဲလုပ်လိုက်ပါ..
နောက်တဆင့်ကတော့ Windows7ဆိုရင် Desktop (right click) Properties > Personalization >
Window Color > Advance Setting ထဲက Item ကနေ message box ကိုရွေးပြီး အောက်က font
မှာ arial ကိုရွေးပြီး Apply > ok..လုပ်လိုက်ရင် windows7အတွက် Viber မှာ မြန်မာစာ ရေးနိုင်
Windows 8 နဲ့ 8.1 အတွက် ကတော့ ဒီ Windows 8 Font Changer ကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါ..
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ အထဲက Windows 8 Font Changer.exe ကို ဖွင့်ပြီး
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း message font မှာ Arial ကိုရွေးပြီး Apply လုပ်ပေးပြီး windows log off
လုပ်ပေး လိုက်ရင် windows 8 နဲ့ 8.1 အတွက် Viber မှာ မြန်မာလို ရေးနိုင် ဖတ်နိုင်ပါပြီ..
တခု ရှိတာက Mozilla သုံးရင် မြန်မာလို ရေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကို ဖတ်လို့ မရတဲ့ ပြသနာ ရှိ
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အဆင့် အတိုင်း လုပ်ပေး ရုံပါပဲ..
ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်..။
ထပ်မံဖြည့်စွက်ချက် ... ။။
Window 10 မှ Viber မြန်မာစာ မမှန်လို့ပါ ဆိုပြီး မေးမေးနေကြလို့ အဆင်ပြေတဲ့ Myanmar Font လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မိ သလောက်တော့ ဒီ Font လေးပဲ အဆင်ပြေ ပါတယ်။
အောက်မှာဒေါင်းယူပြီး Install လုပ်ပါ ပြီးရင် စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။
Zawgyi-One Ghost Font
အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် အောက်က Font ကိုဒေါင်းယူပြီး (Install & Replace လုပ်ပေးပါ)
Zawgyi-One Arial Font
Read more: ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: PC အတွက် Viber မှာ zawgyi font နဲ့ ရေးမယ် ဖတ်မယ်..( Window-7 & 8 )
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, February 09, 2015
ကဏ္ဍ viber, မြန်မာဖေါင့်
first last Wednesday, 09 September, 2015
လူတိုင်းအတွက် အင်မတန် အကျိုးများစေတဲ့ ဆိုဒ် တစ်ခုပါ။ ဒီဆိုဒ်ထဲ ရောက်မိတာ ကျွန်တော့အတွက် အလွန်ပဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ။
ဇင်းမင်းကိုရဲ့ အိမ်ကလေး Saturday, 26 September, 2015
Nay Min Tun Thursday, 15 October, 2015
soehtet Wednesday, 30 November, 2016
အကို ရေ www.minminchit.orgထဲမှာကြည့်လိုက်ပါအဲဒီမှာရတယ် သူdownခိုင်းတဲ့ viberက ခုဟာနဲ့မတူဘူး ကျွန်တော်လည်းအစကမရဘူး
Ashin Koliya Tuesday, 20 October, 2015
ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေမယ့် မရဘူးဖြစ်နေတယ် လေးထောင့်တုံးတွေပေါ်နေတယ် window7ပါ 34 bit နှင့်တင်ထားပါတယ်
Ty Tee Tuesday, 20 October, 2015
တစ်ခါတလေလည်းကွန်ပြူတာကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ် Window မှာ control panel ထဲက Internet option မှာရော ပြောင်းကြည့်ပါလား ကျွန်တော့် window က 10 ပါ ဒီပို့လေးအတိုင်း လုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး
Window မှာ control panel ထဲက Internet option မှာ သာ ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါ
Moe Kaung Kin Wednesday, 10 February, 2016
ကျွန်တော်က window7ပါ အင်တာနက် option မှာ ဘယ်ဟာကိုပြောင်းရမှာလဲ
Hein Htet Aung Wednesday, 18 November, 2015
window 8.1 font changer can't download can u pay me link
Ty Tee Wednesday, 18 November, 2015
window 8.1 font changer Link
Nyinyi Phyowai Tuesday, 15 December, 2015
Window7နဲ့​ဗျ မရဘူး ဘာလို့လဲ မသိဘူး အတုံး​လေး​တွေလဲမ​ပေါ်ဘူး ဘာမှမ​ပေါ်ဘူး ဘလန့်​ကြီးပဲ ဘိုက်​ပါက​တော့ ၁၂ ၁၂ ၂၀၁၅ က​ဒေါင်းထားတာ မြန်​မာစာမရဘူးဖြစ်ေ
Myo Nyunt Thursday, 07 April, 2016
ဟုတ်တယ် ဘာမှ မပေါ် တာ blank ပဲ ပေါ် ပြီး select ရင် high light ဖြစ်တယ် copy ပြီး past လို့ ရတယ်။
Triton Axe Monday, 28 December, 2015
ကျွန်တော်လဲလုပ်တယ် မရဘူးဖြစ်နေတယ် Window7ပါ ဘာအတုံးမှမပေါ်ပါဘူး ဘာစာမှလဲမပေါ်ပါဘူး အကြောင်းပြန်ပေးစေလိုပါတယ်
Ty Tee Wednesday, 10 February, 2016
ကွန်ပြုတာ Error ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်လည်းကွန်ပြူတာကို မမြင်ရ မစမ်းသပ်နိင်တော့ အခြေနေမသိလို့ အတတ်မပြောနိုင်ဘူး။ နားလည်တဲ့သူ တယောက်နဲ့ မေးကြည့်လိုက်ပါ။
Khin Myo Htwe Wednesday, 17 February, 2016
window7ပါ ။ ပြောထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါတယ် myanmar လိုတော့ပေါ်တယ်။ မမှန်ဘူးဖြစ်နေလို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲပြောပေးပါဦး။
window7အတွက်ကို ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အမှန်မထွက်ဖူး ။ မြန်မာလိုတော့ တက်လာတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပေးပါဦး
Ming Y Rau Wednesday, 17 February, 2016
lwin maung Tuesday, 23 February, 2016
မြန်မာစာ ပေါ်ဘူး အတုံးလေးတွေဘဲ ပေါ်တယ်ဗျာ..window7..64 ..
Zun Nwe Wednesday, 24 February, 2016
kaung kaung Sunday, 24 April, 2016
window 8.1မှာ မြန်မာfonts viber pc မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါသော်လည်းfonts အမှန်မပေါပါဘူး please help other way.
window 8.1 viber pc ကမြန်မာfonts မမှန်သေးဘူး ပြောထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ထားသော်လည်း
မရသေးဘူးplease help me other way this errors
nyi naing Monday, 30 May, 2016
windowns xp အတွက်လည်းပြပေးပါအုံး
Lynn Lynn Sunday, 05 June, 2016
Window 10 အတွက်လည်း လုပ်ကြည့်ကြပါဦး ခင်ဗျား ကျွန်တော် က Window 10 သုံးနေတာမို့ပါ
min chit Sunday, 19 June, 2016
ကျွန်တော်တော့ အစ်ကိုပြောတဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်းအတိအကျ window7ကွန်ပြူတာ ၃ လုံးမှာလုပ်တာ။ တစ်လုံးမှ မပေါ်ဘူးဗျာ။
myintzaw oo Friday, 01 July, 2016
lin latt ayar123 Thursday, 07 July, 2016
PCက viberကို ဘယျလိုပွနျပိတျရမလဲ
yan gyi aung Sunday, 24 July, 2016
I'd like you to post for windows 10 too, please. Thanksalot.
Your method is not working for viber PC.
Te Tee Saturday, 06 August, 2016
Window 10 မှ Viber မြန်မာစာမမှန်လို့ပါဆိုပြီး မေးမေးနေကြလို့ အဆင်ပြေတဲ့ Myanmar Font လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မိသလောက်တော့ ဒီ Font လေးပဲ အဆင်ပြေပါတယ်။
Zawgyi-One Ghost Font = http://www75.zippyshare.com/v/4kMQgim2/file.html
Zawgyi-One Arial Font = http://www75.zippyshare.com/v/e6MwFAea/file.html
Yon Glory Kyaw Tuesday, 25 October, 2016
font ၂ခုလုံးနဲ့စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ.. မြန်မာစာတော့ဟုတ်ပေမဲ့ font အမှန်မဟုတ်ဖူးဖြစ်နေပါတယ်... windows 10 နဲ့ viber latest version မှာပါ..
pzphoezaw1 Monday, 03 July, 2017
Viber PC Version 6.8.5 Latest Windows 10 မှာ မြန်မာစာ မပေါ်တော့ဘူး ဆရာတို့
နှစ်ခုစလုံလဲ စမ်းပြီးပါ ပြီ မရသေးပါ
pzphoezaw1 Wednesday, 05 July, 2017
မြန်မာစာ မဟုတ်ဖတ်မရ သောမြန်မာစာတွေပေါ်နေပါ တယ်
နက်ရှိုင်း ခ Thursday, 08 December, 2016
Window .7 မှာ မြန်မာဖောင့် မရရင် Zawgyi-one Ghost font နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အပေါ်မှာ window 1. အတွက် ပေးထားတဲ့ Zawgyi"one ghost font ကို ဒေါင်းပြီး install လုပ်လိုက်ပါ bro။ ကျနော်လည်း window .7မှာ မရလို့ zawgyi-one ghost နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
Puchong Zayyar Saturday, 12 August, 2017
Mmsi Si Saturday, 20 January, 2018
အပေါ်မှာ Viber Font တင်လို့မရဘူး ဒေါင်းလို့မရဘူးပြောတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆရာတင်ပေးထားတဲ့ အတိုင်း သေချာလေး လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ သူများကို အားကိုးလွန်းရင် ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစတွေ ထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး ကျွန်တော်က စေတနာနဲ့ပြောတာပါ ကိုယ်တိုင်းလုပ်လိုက်လို့ ရသွားတဲ့ ပိသိလေးက ဘာနဲ့မှ မလည်းနိုင်ပါဘူး တခုနဲ့အစဉ်မပြေရင် နောက်တခုနဲ့စမ်းကြည့်ပါ အစဉ်ပြေကြပါစေ...
Aung Hein Htet Friday, 02 March, 2018
Mac အတွက်ရော viber မှာ mm font ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလည်း။